TH - ไทยEN - English
ပင်မစာမျက်နှာကျန်းမာရေးအချက်အလက်April 2021သင်၏နှလုံးအားလက်ကောင်ဝတ်ပေါ်တွင်ဝတ်ဆင်ခြင်း - စက်ကရိယာများဝတ်ဆင်ခြင်းဖြင့်နှလုံးရောဂါအားမည်သို့ ကာကွယ်ပေးနိုင်သနည်း။
մայիսի 31, 2021 CardiovascularDetailsMakePerfectionFromTheHeartHeartCenterHeart-Disease
နှလုံစည်းချက်မမှန်သောနှလုံးခါပြသနာ Atrial fibrillation (AF or A-Fib) သည်နှလုံးစည်းချက်မမှန်ခြင်းရောဂါ၏အဖြစ် အများဆုံးရောဂါအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ ဤကျန်းမာရေးအခြေအနေသည် ထိုင်နိုင်ငံတွင်လူဦးရေ ခန့်မှန်းခြေ ၁ - ၂ % ကိုထိခိုက်ပါသည်။ အသက်အရွယ်အားဖြင့်ဤကျန်းမာရေးအန္ထရာယ်တိုးပွားလာပြီး ၄င်းသည် နှလုံးကြွက်သားတောင့်ခြင်း၊ နှလုံးအဆို့ရှင်မလုံခြင်း၊ မွေးရာပါနှလုံးရောဂါ၊ သွေးပေါင်ချိန်ရောဂါတို့နှင့်အလွန်ဆပ်စပ်လျှက်ရှိပါသည်။
ဤကျန်းမာရေးအခြေအနေရှိသောသူများသည် နှလုံးတုန်ခြင်းများ၊ နှလုံး ပုံမှန်မခုန်ခြင်း၊ ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း၊ နာတာရှည်မောပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း နှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်မူးမေ့သည့်လက္ခဏာများခံစားရပြီး ကုသမှုမခံယူပဲထားပါက ပုံမှန်ထက် ၅ ဆ လေဖြတ်နိုင်ချေရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဤလက္ခဏာများကိုကြိုတင်သိရှိနိုင်ပါက လေဖြတ်ခြင်း အန္ထရာယ်များကိုလျှော့ချနိုင်ပါသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ AF ခံစားနေရသူခန့်မှန်းချေ ၅၉.၇ သန်းခန့်ရှိပြီး လွန်ခဲ့သောနှစ် ၃၀ ခန့်မှန်းချေထက် ၂ ဆဖြစ်နေသည်။ ဤအရေအတွက်ထဲမှ အများစုသည် AF ခံစားနေရသည်ကိုသတိမထားမိကြပါ။ မတိကျသောလက္ခဏာများနှင့် ရံဖန်ရံခါသာဖြစ်သောလက္ခဏာများကြောင့် နှစ်စဉ်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေး၍ရောဂါ ရှာဖွေရာတွင် AF ဝေဒနာအများစုအား လွတ်သွားလေ့ရှိသည်။ တစ်ကိုယ်ရေကျန်းမာရေးစောင့်ကြည့်ပေးနိုင် သောကရိယာပေါ်ပေါက်လာခြင်းသည် ဤပြသနာ၏ ကြာမြင့်စွာ စောင့်ဆိုင်းခဲ့သောအဖြေဖြစ်သည်။ ဝတ်ဆင်ထားခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာသောလက္ခဏာများကို လူနာအားချက်ချင်းဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ပြီး ကုသမှုခံယူရန်အချိန်ကောင်းရှာနိုင်မည်ဖြစ် ပါသည်။ ဤအမြင်သဘောထားအား စတန်းဖို့ဒ် တက္ကသိုလ်၏စူးစမ်းရှာဖွေချက်အရ စမတ်ကျနာရီ (smartwatch) ၏အခြေခံ အက်ပလီကေးရှင်းသည် နှလုံစည်းချက်မမှန်သောနှလုံးခါပြသနာ Atrial fibrillation (AF or A-Fib) အား လက်ခံနိုင်သော တိကျမှန်ကန်မှုအဆင့်ကိုဖော်ထုတ်ပေးနိုင်သည်။
ဤလေ့လာမှုတွင် ယခင်နှလုံးရောဂါရာဇဝင်မရှိခဲ့သောလူဦးရေ ၄၁၉,၂၉၇ ယောက်စာရင်းပါဝင်သည်။ ထိုသူများသည် ပျမ်းမျှအားခြင့် ရက်ပေါင်း ၁၁၇ ရက်တွင် Apple Watch အားအမြဲတမ်းဝတ်ဆင်ထားပြီး အက်ပလီကေးရှင်းအား ထိုသူများ၏ ဖုန်းအတွင်းသို့ အချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းကာစောင့်ကြည့်ခဲ့ပြီးမမှန်သောနှလုံးစည်းချက်များ တွေ့ရှိခဲ့ပါက အသိပေးချက်များထုတ်ပေးပါသည်။ ပါဝင်သူများသည် အက်ပလီကေးရှင်းမှအသိပေးချက်များရရှိပါက စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသောဆရာဝန်အားဆက်သွယ်ရပါသည်။ အချက်အလက်များဖတ်ရာတွင် ပြင်းထန်သော ပုံမှန်မဟုတ်သည့်အချက်များကိုပြပါက ကျန်းမာရေးစောင့်ကြည့်ပေးသော ဆရာဝန်မှ ပါဝင်သူအားဆေးကုသမှုခံယူရန် ချက်ချင်းတိုက်တွန်းမှာဖြစ်ပြီး အချက်အလက်များသည် ထိုသို့တုံ့ပြန်ရန် ခိုင်လုံသောပြင်းထန်ခြင်းမရှိပါက ပါဝင်သူအား အချိန်နှင့်တပြေးညီ EKG စစ်ဆေးပေးပြီးဆရာဝန်မှအချက်အလက်များကိုစီစစ်ရန်တင်ပြပေးရပါသည်။
ပုံမှန်နှလုံးစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသောလူများဝတ်ဆင်ထားသော စက်ကရိယာသည်လွန်ကဲစွာတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိသောကြောင့် ပါဝင်သူအများစုသည် သတိပေးချက်များမရရှိပါ။ သို့သော် သတိပေးချက်ရရှိပြီး EKG စက်တတ်ဆင်၍စစ်ဆေးခဲ့ သောပါဝင်သူများ၏ ၈၄% သည် EKG patch ဖတ်ရှုခြင်းမှ နောက်ဆက်တွဲ AF ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပါသည်၊ ထိုပါဝင်သူများ၏ ၃၅% သည်နောက်ပိုင်းတွင် AF နှလုံးစည်းချက်မမှန်ခြင်းရောဂါရှိကြောင်းအတည်ပြုသည်။ ဤစက်ကရိယာများသည် ဝတ်ဆင်သူများ၏ကိုယ်ခန္ဓာကျန်းမာရေးကိုစောင့်ကြည့်ရာတွင် ထိရောက်ကာ ယုံကြည်ရနိုင်သောအလားအလာရှိသည်ကိုတွေ့ရှိနိုင်သည်။
ပုံ ၁။ နာရီ၏ features မှ EKG အဖြေသည် ပုံမှန်နှလုံးစည်းချက်အားပြသခြင်း။
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်မှာ Apple Watch series 1 to3အသုံးပြုပြီးလေ့လာရာ၌ နာရီဝတ်ဆင်ထားသောသူ၏ နှလုံးခုန်နှုန်းကိုသာသိရှိနိုင်ပြီး EKG တိုင်းတာနိုင်ခြင်းအရှိပါ။ ဆိုလိုသည်မှာလိုအပ်လာပါက EKG တိုင်းတာသည့်စက်ကရိယာအား ပါဝင်သူများထံသို့သီးသန့်ပို့ဆောင်ပေးရပါသည်။ Apple Watch ၏ series4and5တွင်မူ EKG တိုင်းတာနိုင်ရန် နာရီအတွင်းထည့်သွင်းထားပြီးဖြစ်သည်။
သင်၏နှလုံးခုန်စည်းချက်ပုံမမှန်ခံစားရသည်ဖြစ်စေ၊ စမတ်ကျနာရီ(smartwatch) မှအသိပေးချက်ရရှိသည်ဖြစ်စေ နှလုံးစည်းချက်မမှန်သော နှလုံးခါပြသနာသံသယရှိပါက စစ်ဆေးမှုများတိုး၍ပြုလုပ်ရပါမည်။ EKG နှလုံးခုန်နှုန်းစောင့်ကြည့်ခြင်းကိုအဓိကလိုအပ်သည်သာမက အခြား အရေးကြီးသောအချက်အလက်ဖြစ်သည့် သွေးဥဆဲလ်အရေအတွက်၊ ကျောက်ကပ်လုပ်ဆောင်ချက်၊ သိုင်ရိုက်လုပ်ဆောင်ချက်များစစ်ဆေးရပါမည်။ AF လက္ခဏာကိုကုသသည့်အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ရောဂါလက္ခဏာများလျော့စေရန်နှင့် လက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ခြင်း၏ နောက်ဆက်တွဲပြသနာများကိုကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဆေးသောက်သုံးခြင်း၊ cardioversion နှလုံးအားစည်းချက်မှန်လာရန် လျှပ်စစ်ဓာတ်ကိုရင်ဘတ်ကနေတဆင့်ပေးခြင်းနှင့် နှလုံးစည်းချက်မမှန်ခြင်းရောဂါဖြစ်စေသော ရောဂါတစ်ရှူးအား radiofrequency ablation လျှပ်စစ်အင်နာဂျီအပူလွှင့်ပေးခြင်းဖြင့် ဖျက်ဆီးပေးခြင်းများဖြင့်ကုသနိုင်ပါသည်။
ပုံ ၂။ EKG ရလဒ်များအား PDF ဖိုင်အဖြစ် သင့်၏ဆရာဝန်ထံပို့ခြင်း
သင်၏ကျန်းမာရေအားစောင့်ကြည့်နိုင်ရန် Apple နာရီကိုပုံမှန်ဝတ်ဆင်ပြီး သင်၏နှလုံးခုန်ခြင်းပုံမှန်မဟုတ်ကြောင်းခံစားရ ပါက ထိုအချက်အလက်မျာကို ယူဆောင်လာကာ ဘမ်ရွန်ဂရတ်နှလုံးဌာနနှင့်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ အကွာအဝေးသတ်မှတ်ပိုင်းခြားခြင်းများအတွက် စိုးရိမ်ပါက ၁၃၇၈ နံပါတ် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပလီကေးရှင်းမှတဆင့် အန္တရာယ်ကင်းပြီးအဆင်ပြေစွာ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ပြင်းထန်သောရောဂါလက္ခဏာများနှင့်အရေးပေါ်အခြေအနေများ အတွက် ဘမ်ရွန်ဂရတ်၏အရေးပေါ်ဌာနသို့ တစ်ရက်တွင် ၂၄ နာရီ၊ ၀၂ ၀၁၁ ၅၂၂၂ နံပါတ်အား တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
Tel. +66 (0) 2011 3491
Tel. +66 (0) 2011 3411
ပုံမမှန်ခြင်းလည်းအစာရှောင်ခြင်း, သို့မဟုတ်မမှန်လွန်းနှေးကွေးသောနှလုံးခုန်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ infographic ပိုမိုလေ့လာပါ။
ခေါင်းမူး, တစ်ပြိုင်ကားနှလုံးခုန်, အသက်ရှုမဝြခင်း, ရင်ဘတ်နာကျင်မှု Feeling နှလုံးပုံမမှန်ခြင်း, အရေးပေါ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအာရုံကိုလိုအပ်သည်တစ်ခုမမှန်နှလုံးခုန်အချက်ပြစေခြင်းငှါ